ओमकार टाइम्स के नेपाल गृह मन्त्रीको निजी घर हो ? ऎन नआउदै नागरिकता दिने सर्कुलर ‘आपत्तिजनक’ – OMKARTIMES
के नेपाल गृह मन्त्रीको निजी घर हो ? ऎन नआउदै नागरिकता दिने सर्कुलर ‘आपत्तिजनक’
उपसचिवले गरेको सर्कुलरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, स्मरणीय के छ भने सर्वोच्चतले पनि यसरी ठाडै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशमा ‘कानूनबमोजिम’ भन्ने शब्द उल्लेख थियो । त्यसैले कानून नबनाइकन यसरी नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने आचार्य बताउँछन् ।